Myanmar Defence Weapons: ဘင်္ဂလားဒေ့်၏ အင်အားတိုးချဲ့မှုနှင့် မြန်မာ့တပ်မတော်
aungko zaw December 27, 2013 at 5:17 PM
အကိုတင်ပြတာအရမ်းကောင်းတယ်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးဒုံလက်နက်မှာအကြောင်းပြည့်ပြည်စုံစုံလေးသိချင် ပါတတယ်ခင်ဗျာ တာဝေးပစ်ဒုံးလက်နက်ကောပိုင်ဆိုင်နေပါပြီလာခင်ဗျာ ခင် မင် စွာဖြင့် အကိုmm နေကောင်းကျန်းမာပြီး post တွေမျာများတင် နိုင်ပါစေ
MM December 27, 2013 at 9:48 PM
လေကာစနစ်ကတော့ အာဆီယံအတွင်းမှာ အကောင်းဆုံးလို့တောင် ပြောလို့ရနေပါပြီ...။ ဘင်္ဂလားဒေ့်အနေနှင့် FM-90 တာတိုပစ်တွေကို ၂၀၁၁နှောင်းပိုင်းတွေမှ ပိုင်ဆိုင်လာတာပါ...။ တပ်မတော်မှာကတော့ တာတို၊တာလတ်၊တာဝေးဆိုပြီး ထိရောက်တဲ့ လေကာစနစ်ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်...။ တာဝေးပစ်ဒုံးလက်နက်ကတော့ တိကျတဲ့သတင်းမသေးပါဘူး...။
Unknown December 28, 2013 at 2:15 AM
အကို အမ်အမ်ရေ ဘတွေရဲို့ရာနဲ့ တပ်မတော်ရဲ့ နိုရာ ဘယ်သူ့ဟာ ပိုသာလဲ ခင်ဗျာ
aung shein December 28, 2013 at 3:01 AM
အကိုေ၇ ဘကုန်းတွေက sub ၂စီးပိုင်တော့မယ်နော်။ကျွန်နော်တို့ေ၇ာ sub အစီအစဉ် မ၇ှိသေးဘူးလား။လေကာစနစ်က ကောင်းမွန်နေပြီဆို၇င်ေ၇ကြောင်းကာစနစ် အကြောင်းလေးလဲ တင်ပြပေးပါခင်ဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အမြဲစောင့်မျှော် အားပေးလျှက်ပါ
YoeThit Aung December 28, 2013 at 10:55 AM
လက် နက် အင် အား လူ အင် အား ထက် နည်း ဗျု ဟာ၊ နည်း ပ ရိယ် ၊ စည်း ကမ်း ၊ ကွပ် ကွဲ မူ နဲ စိတ် ဓါတ် ရေး ရာ က တိုက် ပွဲ တစ် ပွဲ ရဲ အ ဆုံး အ ဖြတ် လို ဘုရင့် နောင် မင် တ ရား က ပြော ခဲ ပါ တယ်
ငါ တို ကိုယ် ခနဓ တွေ သန်မာ ခဲ့ ပေ နေ ဥနောက် တွေ သေး ခဲ လို ငါ တို ခြေ လက် တွေ ကျိုး ခဲ ရ ပြီး လို လှေတော် အသင်း ၀န် မင်း စ ကား ရှိ ခဲ ပါ တယ်
ငြေ်္ခသေ့ တစ် ကောင် ဦဆောင် တဲ့ ခွေ တစ် ထောင် တပ် ဟာ ငြေ်္ခသေ့ တစ် ထောင် လို စွမ်း နိုင် သ လို ခွေတစ် ကောင် ဦး ဆောင် တဲ့ ငြေ်္ခသေ့ တစ် ထောင် တပ် ဟာ ခွေတစ် ထောင် လို ပဲ ပြု မူ နိုင် ပါ လိမ် မယ် လို န ပို လိ ရန် ပြော ခဲ ပါ တယ်(နိုင် ငံ ရေး ပုဂို စွဲ ရည် ရွန်း ပြော ခြင် မ ဟုပ် ပါ commanding skill ,leadership skill ကို သာ ရည် ရွယ် သည်)
ငါ တို မှာ စိတ် ဒတ် ဆို ဓား တစ် လက် ထက် မြတ် နေ သေး သရွေ ဘယ် တော့ မ ရူံး ဘူး လို ဒုတိယ ကဘာ စစ် အ တွင်း ဆိုင်း ပန် ကျွန်း မှာ ကျော် ကြား ခဲ တဲ့ ဂျန် ပန် ဧ က ရာဇ် တပ် က ဗိုမူး အိုဘ က ပြော ခဲ့ ပါ တယ။ ကျွန် တော် ရဲတစ် ကိုယ် တော် အ မြင် နဲ တော့ နည်း ပ ညာ ၊ လက် နက် ၊ လူအင်အား ထက် စိတ် ဓာတ် စွမ်း အား ၊စည်း ကမ်း ၊ခေါင် ဆောင် မူ စွမ်း ရည် စစ် ပ ရိယ် ၊ စ တဲ့ လူ စွမ်း အား အ ရင် အမြစ် တွေ မြန်မာ တပ် မ တော် မှာ ဒီ ထက် ပို ပြီး ဖွံ ဖြိုး ပါ စေ လို အ ကြံ ပြု ဆု တောင်း လိုက် ပါ တယ် ။
maung myint December 30, 2013 at 1:09 AM
karl gustav လိုတင့် ဖျက်ဒုံးတွေကိုယ်တိုင်ထုတ်နိုင်နေပီဆိုတော့ ဝမ်းသာစရာပါပဲဗျာ
thantzaw January 5, 2014 at 6:39 PM
လက်နက် အင်အားတစ်ခုတည်းသာလို့ မဖြစ်ဘူး၊ သူတို့ မှာ ငါတို့ တိုက်ရင်သေမယ်ဆိုတာစိတ်နဲ့ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တုံးက ဂျပန်တွေလုပ်သလို လုပ်ရင် တို့ အထိနာလိုက်တယ်။ သူတို့နိုင်ငံရေး မတည်ငြိမ်တာ ကျွန်တော် တို့အတွက် စောင့်ကြည့်ချိန်ပိုရနေပါတယ်၊ ဘင်္ဂါလီအရေးမှာ သူတို့ရဲ့ မသမာမှုတွေ နောက်ကွယ်မှာရှိနေနိုင်တယ်။ မြန်မာဓါးရေး ထက်ရင်လည်း ကိုယ့်အခြင်းခြင်းတိုက်လို့ ဓါးသွားမလိမ့်လိုပါ။ အမြဲစောင့်ကြည့်သတိထားလိုပါတယ်။ နိုင်ငံသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ အကြံပေးတာပါ။
Mr.hlaingbwer January 17, 2014 at 7:41 AM
2400thaque February 1, 2014 at 10:12 PM
Recently, Bangladesh has ordered 480 Kornet-E missiles, 24 YAK 130 LIFTs,9K-8W trainers and GAMMA DE1 and JH-16 3D radars. These will be deployed near myanmer border areas to keep tab of military activities on Myanmar side.
Kyaw Nanda February 9, 2014 at 2:00 AM
ကိုMM ‌ရေ Sub M ‌‌‌ဘယ်‌‌တော့‌လောက်‌ကြရင်‌ပိုင်‌ဆိုင်‌မလဲ။
koko aung March 23, 2014 at 9:45 AM
usa ကို ကိုကိုးကျွန်းငှားလိုက်
Sub ယူလိုက် တရုပ် တောင် မလုပ်ရဲဘူးဖြစ်သွားမယ်